Usana olusanda kuzalwa luyindoda encane futhi enesibindi. Abazali, ikakhulukazi abasha, bahlale bekhathazekile ngempilo yakhe nentuthuko. Futhi ezinsukwini zokuqala ndawonye kunzima kakhulu ukunquma ukuthi yini engabhekwa njengesijwayelekile, kodwa yini ehamba ngaphezu kwayo. Futhi ingane, eqinisweni, manje isakwazi kuphela ukudla nokulala. Ngakho-ke, lo mbuzo ujabulisa kakhulu: "Ngabe kufanele usanezele kangakanani isisindo?" Lokhu kuphela inkomba kungasiza umama osemncane ukuqinisekisa ukuthi wenza konke okulungile.
Isisindo somntwana osanda kuzalwa
Kucatshangwa ukuthi kuyinto evamile uma ingane egcwele isikhathi esinezinyanga ezintathu kuya ku-4 ngesikhathi sokuzalwa. Abafana ngokuvamile banzima kunamantombazane. Izingane ezingaphansi kwamakhilogremu amathathu zibhekwa njengezincane, zizothola isisindo ngokushesha. Izingane ezingaphezu kwamakhilogremu amane zizocatshangwa njengezikhulu futhi, ngokufanele, zingakwazi ukuthola isisindo kancane kancane.
Kungakanani ingane esanda kuzalwa okufanele ifakwe ngesisindo inyanga ngayinye
Kunezimo ezithile ukuthi izingane zezingane nabazali ziqondiswa lapho behlukanisa imingcele yentuthuko yengane. Ngenyanga yokuqala yokuphila, izingane zandisa isisindo sayo cishe nge kilogram, kodwa kuvunyelwe ukuba zanda kusuka ku-500 g kuya ku-1.5 kg. Ezinyangeni ezimbili naseyesithathu, izibalo ezilinganisa ukuthi ingane kufanele isilinganise kangakanani ngama-700-800 amagremu, futhi kuqhubeke kuze kube ngonyaka - cishe amagremu angu-500. Izingane ezinesihluku zandisa isisindo sayo ngokushesha, futhi izingane ezinkulu zingase zingabi ze-ze. Ngakho-ke, inzuzo yesisindo somntwana osanda kuzalwa kufanele ibe cishe amagremu angu-20.
Iyiphi inzuzo yesisindo okufanele ithathwe njengokujwayelekile
Kodwa-ke, kufanele kukhunjulwe ukuthi ingane esanda kuzalwa ingowokuqala umuntu omncane onomzimba wakhe. Ngamunye wabo unobuntu bawo, futhi ubonakala kakade ngendlela yokudla. Ezinye izingane zihlasela ukudla ngokuhaha, ziphuza ukuze zize zishaye. Futhi abanye bathatha isifuba noma isisu ngokudabuka, bancelise kancane, bangalala futhi badle futhi. Ngakho-ke, izindinganiso ezithile zezinkomba ezijwayelekile, zingaki izingane ezisanda kuzalwa kufanele zilinganise ngesisindo, zingahluka. Kukhona izingane ezingavali amehlo uma zingenelisekile ngokugcwele, nalabo abangakwazi ukulala ngokuthula ngaphandle kokudla ngokwanele. Kodwa ngokuvamile ingane elambile iyaba yincinci, ivuka ngaphambi kwesikhathi esivamile sokudla bese iqala ukukhala. Lokhu kumele kubikwe kudokotela wengane, ozohlola ingane bese eqinisekisa unina, uzokwenza izincomo ezidingekayo. Ungesabi futhi uqale ngokushesha ukondla umntwana okhalayo ngenhlanganisela, esaba ukuthi unondlekile. Okokuqala, ubisi lwebele luwumthombo obalulekile wamavithamini nezinye izakhi, futhi okwesibili, ukukhala kungabangelwa indlala kuphela. Kungcono ukuzama ukusebenzisa ingane kaningi emathunjini, uma uyondla, mnike kokubili elinye nelinye. Umzimba wesifazane uklanyelwe ngendlela yokuthi uzivumelanise nezidingo zomuntu omncane, kubalulekile ukungaphazamisi nale nqubo. Futhi-ke, isimo esizolile nesobungane sizosiza ekuthuthukiseni inqubo ye-lactation. Ngakho-ke, ochwepheshe abacebisi futhi omama abangenakuphumula ukuba basebenzise izilinganiso ezinganeni, ngaphandle kwalokho isisindo ngasinye singaba ukucindezeleka okusha kubo. Kudingeka uthembele ingane yakho ngaphezulu futhi ungakhohlwa ukuthi inani elisanda kuzalwa lingabeka isisindo kunoma yiliphi icala linganqunywa kuphela ngumchwepheshe.
Uma kuziwa enganeni, kungaba nzima kakhulu ukuthola ukuthi yini engabhekwa njengesijwayelekile. Futhi kufanele uzimise lapha kuqala empilweni yakhe yempilo. Uma umntwana ejabule, elala kahle, asikho isizathu sokukholelwa ukuthi unondlekile. Khona-ke inkinga, kungakanani ingane esanda kuzalwa okufanele isisindo ngesisindo, ayifanele kakhulu.
I-Cybex Pallas 2 Hlela isihlalo semoto: izici ze-model
Yensimbi Serum njengoba supply isipele umzimba